1. Waa maxay Epithalon Acetate?
2. Epithalon Acetate Habka waxqabadka
3. Codsiyada Epithalon Acetate
4. Isticmaalka Epithalon Acetate ee tixraaca
5. Faa'iidooyinka Epithalon Acetate
6. Epithalon Acetate side effects
7. Xaaladaha kaydinta Epithalon Acetate
8. Halkee laga iibsadaa daawada Epithalon acetate?
Weligaa ma maqashay Epithalon acetate? Miyaad baadigoobeysaa oo aad dooneysaa inaad wax walba ka ogaatid? Haddii ay haa tahay, markaa maqaalkan ayaa kaa caawin doona inaad ku ogeysiiso Epithalac Acetate. Maqaalkani wuxuu ku jiri doonaa aqoon guud oo ku saabsan daroogada. Qaybaha kala duwan ee qodobkan waxay noqon doonaan sida soo socota:
Epithalon acetate (CAS: 307297-39-8) waa nooca peptide oo sidoo kale loo yaqaanno a maandooriyaha gabowga ah. Magacyada kale ee daroogada loo yaqaanno waa Epithalon, Epithalone, Ala-Glu-Asp-Gly, UNII-O65P17785G iyo kuwo kaloo badan. Waxaa la ogyahay in Epithalon Acetate, oo ay soo diyaarisay Machadka St.Petersburg ee Bioregulation iyo Gerontology. Daawadani waa qayb ka mid ah firfircoonida firfircoon ee qanjidhada yaryar ee laga helo maskaxdeenna loo yaqaano qanjaha pineal. Ka dib markii la sameeyo baaritaan faahfaahsan, waxaa la ogaadey in daawadani ay kordhiso dhererka taleefanka ee unugyada dhiigga ee dadka da'doodu tahay 60-80years. Daraasad la mid ah, waxaa la ogaaday in dadkaas daroogadaas la siiyey la siiyey 90% dadka waxay muujiyeen natiijooyin wanaagsan.
By kordhinta dhererka telomer-ka ee unugyada dhiigga ee dadka da'da ah ee dadka da'da ah, waxay ka caawisaa sidii loo ilaalin lahaa jirka si uu u noqdo mid adag oo caafimaad qaba.
Ilaa hadda, waxaan ognahay in daroogadani ay noqon karto naf-badbaadin waxayna u shaqeyn kartaa daroogada da'da yar ee daawada gabaadsan. Dhinaca kale, waxaanu ka wadahadlaynaa habka dawada Epithalon Acetate.
2. Epithalon Xaqiijinta nidaamka ficilka
Iyadoo gacan ka heleysa qodobkan, waxaynu ogaan doonnaa qaabka ama u shaqeynta dawada Epithalon acetate in ficilka. Epithalon acetate waxay u egtahay sida budada cad, budadaas waxaa lagu qasi karaa biyo, laakiin mararka qaarkood, waxaa la doorbidayaa in lagu daro 1 khafiif ah xal of acetic acid. Daawadani waa mid degan heerkulka qolka. Walxaha daawada Epithalon acetate waa Epitalon ((S) -4- (S) -2-aminopropanamido) -5 - ((S) -3-carboxy-1 - ((karboksimetil) amino-1-oxopropan-2 -yl) amino) -5-oxopentanoicacid). Habka dhabta ah ee daawadani waxa weeye in uu ku dhex jiro bukaanka bukaanka qaba cuduro gaar ah ama dhowr ah, ka dib marka uu ku dhex jiro bukaanka bukaanku wuxuu si toos ah u weerari karaa xubnaha ama unugyada. Haddii si toos ah u disho unugyada faafiya cudurka, adoo samaynaya in ay si fiican u dilaan cudurka.
3. Codsiyada ee Epithalon Acetate
Waqtigan, waxaan ka ogaan doonaa codsiyada Epithalon Acetate.
Anti-gabowga- Arjiga koowaad ee daroogada ayaa ah in ay ka caawiso geedi socodka ka hortagga gabowga. Daawadan ayaa si weyn loo isticmaalaa aduunka aduunka ugu badnaan. Daawada Epithalonacetate waxay ugu fiican tahay ujeeddooyinkan, noocyo badan oo cilmi baaris ah oo dunida oo dhan ah ayaa la sameeyey, natiijooyinka daraasad kasta waa mid aad u fiican, ma jirto kiiskan xun, ee ka soo baxay baaritaanka.
AntioxidantDaawada Epithalon Acetate waxay kaloo u shaqaysaa sida antioksidan. Iyada oo ay caawimaad ka heleen dadka daawada ah ee daroogada ku jira, dad badan ayaa hela faa'iidooyin badan. Iyadoo caawimaad ka heleysa antioxidants, waxyeello loo geysto unugyada jidhkeena ee maalin kasta oo shaqeynaya waa mid gaabis ah. Tani waxay hoos u dhigeysaa hoos u dhaca unuga unugyada jidhkeena waxay ka caawisaa kor u qaadida caafimaadka guud. Faa'iidooyin fara badan ayaa ka mid ah daawooyinkan Epithalon Acetate, oo ka caawiya dad badan oo maalin walba jooga.
Telomere- Arinta kale ee daawadani waxay tahay in ay ka caawiso kor u qaadida xadiga telefoonka ee unugyada dhiigga. Daaweynta ujeeddadan waxaa la siiyaa oo keliya dadka da'doodu u dhaxayso 65 ilaa sanadka 80.
ResearchUjeedada- Arjiga ugu dambeeya ee daawadani waxa weeye in wali loo isticmaalo ujeeddo cilmi-baaris oo loogu talagalay cuduro badan oo kala duwan oo ku saabsan xayawaanka kala duwan. Inta badan kiisaska waxaan heleynaa natiijooyin wanaagsan oo kaliya, waxaana sidoo kale ku dhinta cudurada sida unugyada kansarka iyo kuwa kale oo badan, kuwaas oo intooda badan daawooyinka ay jiri kari waayeen.
4. Epithalon Dheefaha Acetate
Waxaa jira faa'iidooyin badan oo ah daawada Epithalon Acetate oo aan ahayn Habka anti-gabowga kaliya, Waxaan ka wada hadli doonnaa faa'iidooyinka kale ee daroogada kuwaas oo aan ka yareynin dadweynaha halkaa ka jira-
♦ Kordhinta nolosha
Ka hor inta aanad daawooyinkaan u isticmaalin bani-aadamka, cilmi-baarisyada ayaa lagu sameeyey xoolo badan oo aan lahayn xayawaan la dhaawacay; Sidaa daraadeed natiijada baaritaannadaas waxay u timid sidii kor loogu qaadi lahaa 11 ilaa 17percent nolol maalmeedka xayawaankaas. Xayawaanka kala duwan, nolol maalmeedka ayaa ka duwanaa.
Ka dib markii baaritaanka saxda ah lagu baaro xayawaankan, ka dib marka daawadan ka dib loo isticmaalo in loo isticmaalo bini-aadanta sidoo kale daawadani waxay muujisay natiijooyin wanaagsan. Sida adigu waa inaad ogaataa in hadda oo hadda jira nolol caadi ah ee dadka ku nool ay ku dhow yihiin XIUMX illaa 40 sanadka ugu dhow, sidaa daraadeed isticmaalka daroogadan waxaan sii kordhin karnaa noloshaan ilaa 50 boqolkiiba. Iyadoo ay ku noolaan karto nolol maalmeedka 16-60.
♦ Kordhinta waxqabadka enzyme
Marka qofku ku iibiyo markaa enzymes ee jirka ku jirta waxay bilaabeysaa hoos u dhac aad u weyn. Sidaa darteed, xaaladdan, daawada epithalon acetate waxay kaa caawin kartaa sii kordhinta waxqabadyada enzim ee jirkeena.
Waxqabadyadan enzymes ayaa masuul ka ah waxqabadyada guud ee ku dhaca jidhkeena iyadoo la adeegsanayo dhammaan hawlaha jirkeena. Hoos udhaca ficilka enzyme wuxuu ahaa arrin culus sababtoo ah dadku ma awoodi karaan inay tilmaamaan dhibaatooyinka markaas kadib noocyo farabadan oo farsamooyin cilmi baaris ah lagu ogaanayo.
♦ Saliida Melatonin iyo rikoodhada wareegga
Aan u sheego wax walba oo ku saabsan waxa qarsoodiga melatonin iyo garaaca wareegga wareegga ah. Makhatonin waxaa soo saarey qanjirada dhabta ah, taas oo laga helo maskaxdeena, dheecaankani ma muuqdo muhiim, laakiin waa mid aad u muhiim ah, sababtoo ah qarsoodigan badan oo saameyn nafsi ah iyo dabeecadaha bani'aadamka ayaa la xiriira. Inkasta oo rikoodhada wareegga ahi ay tahay geedi socod gudaha ah oo aad u dabiici ah, caawimadani waxay ku kacdaa wareegga hurdada ee qof walba.
Xaaladdan oo kale, daawada epthalon acetate waxay ka caawisaa habab kala duwan sida ma jiri doonto saameyn nafsi ah oo nafsi ah, iyo daawadani waxay sidoo kale ka caawineysaa wareegga hurdada wanaagsan. Kuwa haysta waqti adag inay seexdaan markaa daawadani waxay aad u faa'iido u leedahay.
♦ Kajirinta kansarka
Intii lagu guda jiray cilmi-baarista lagu sameeyay heerarka iyo jiirarka, inta lagu gudajiro natiijada cilmi-baaristaas, waxaan ogaanay in daawadan epithalon acetate ay soo saartaa unugyada noocan oo kale ah oo ka caawisa geerida unugyada kansarka. Ka dib markii arrintan la ogaaday, xoolo badan oo qaba kansar ayaa la siiyay qiyaasta daawadan, oo si la yaab leh, waxay kufilan yihiin daaweyn, maadaama daroogada ay samaysay dhammaan unugyada kansarku ay dhintaan.
Ka dib markii cilmi-baaristaan ​​lagu guuleystey, markaa daawadan ayaa la siiyey bukaannada kansarka bani-aadamka, iyo kiiskoodu, daroogadaas ayaa si fiican u shaqeeyay, iyo mararka qaarkood, waxay xitaa bogsiineysaa macaamiisha. Daawadani waxay si toos ah u shaqeysaa unugyada iyo genka ee kansarka ku jira jirka bini-aadanka.
Cudurkani waa nooca indhaha; kiiskan, ulaha ku jira indhaha qofka ayaa hoos u dhacaya. Dawadani waxay ka caawisaa daaweynta cudurkan indhaha. Cudurkaan waxaa sidoo kale lagu daaweeyaa marka hore xayawaanka; xitaa, markii cilmi-baarista ay qaadatay meesha xayawaanka, in ka badan 90% xayawaanka ayaa si habboon loogu bogsiiyey. Ka dib markii, markii daawadan la siiyey bukaanno bani'aadam ah oo ku dhow 90% bukaanada ayaa laga daweeyay cudurkan.
♦ Wuxuu hagaajiyaa antioxidant
Waxaan u sheegey korka ku saabsan isticmaalka iyo muhiimada antioxidants. Waxay hoos u dhigaan habka unugyada dhaawaca ah, iyada oo gacan ka geysaneysa hoos udhigida geedi socodka gabowga. Dhammaan seerayaasha waxaa laga helay markii cilmi-baadhistu ay ka dhacdey xayawaanka. Ka dib markii uu ogaado in daroogadani ay ka caawiso hagaajinta antioxidant, daroogada ayaa la siiyay xayawaan aan laheyn antioksidan, iyo daraasad ka dib, waxaa la ogaaday in daroogadani ay ka caawiso hagaajinta antioxidants ee jirka xayawaanka. Kadib markii ay arkeen natiijooyin noocaan oo kale ah, daroogada ayaa la siiyay bukaanno qaba cudurkan, daawadan antioksidan ayaa la siiyey, waxaana ay ka caawisay in ay hoos u dhigto geeddi-socodka dhibaatada unugyada.
5. Epithalon Cilladaha soo noqnoqda
Sida waa inaad ogaataa in wax walbaa ay wanaagsan yihiin iyo waxyeelo xun. Isla waa kiiskan leh daawadan epithalon acetate. Ilaa hadda, waxaad ogaatay faa'iidooyinka daroogada, laakiin waqtigan, waxaad ogaan doontaa saameynta daawada ee daroogada. Noocyo badan oo cilmi baaris ah ayaa la sameeyay, laakiin illaa iyo hadda, ma helin wax saameyn ah oo ka imanaya daroogadan. Waxyeellada kaliya ee aan helnay waa sida aan uga wada hadalnay in daawada epithalon acetate ay ka caawiso kororka dhererka telomere ee unugyada dhiiga ee dadka da'da 60 sanado 80. Waxyaabaha kale ee daaweyntu waa in xaaladaha qaarkood, tani waxay sidoo kale saameyn xun ku yeelataa sidoo kale.
Saameyntan soo socota, mararka qaarkood, waxay kor u kacday heerkan oo kale iyadoo nolosha dadka ay sidoo kale lumisay saameyntan.
Tani waxay ahayd saameynta kaliya ee aan aragno illaa iyo hadda ka dib isticmaalka daroogada this sanado badan. Daawadani waa daroogo nolol-badbaadin ah, laakiin kiisaska aan si fiican u fulin, ama waxaan dhihi karnaa waxa ka soo horjeeda waxay ku dhowyihiin 10% xaaladaha, halka 90% kiisasku ay daaweeyeen dhibaatooyinka bukaanada. khatarta xaaladaha qaarkood, ma jirin wax dabiici ah oo laga helay xaaladaha qaarkood sababta daawadani aysan si sax ah u shaqeynin, noocyo badan oo cilmi baaris ah oo ku saabsan kiisaska khaladka ah ayaa la sameeyay, laakiin waxba ma soo galin gacmaheena.
6. Epithalon aisticmaalka gawaarida ee tixraaca
Daawooyinka kasta waxay leeyihiin qiyaas sax ah, iyo tan daroogada muhiimka ah waxay leedahay qiyaasta saxda ah, iyo haddii qof uusan u qaadan daawadan iyada oo loo eegayo qiyaastaasi, markaa waxay sidoo kale u shaqeyn kartaa khaladkooda. Sidaa daraadeed nala socodsii qiyaasta saxda ah ee daawadan, fadlan si fiican u eeg.
Qiyaasta daawadani waxay ku xiran tahay cudurada nooca cudurka aad qaadatid daawadan. Waxaa jira saddex hab oo kala duwan iyo saddex nooc oo kala duwan oo qiyaas ah, waxayna yihiin kuwa ugu wax ku ool ah, mid dhexdhexaad ah midka ugu fiican iyo midka ugu waxtar leh. Waxay si ku filan ku xiran tahay nooca qiyaasta ee aad qaadanayso, waxaad kala tashan kartaa dhakhtarkaaga qiyaasta daawada. Sidaa daraadeed qiyaasta waa:
Epithalon acetate qiyaasta (ugu waxtar badan)
Mudada-Daawadan waa in la qaataa kadib mudo haboon, iyo daawada yareyneysa, waa inaad qaadataa daawadan u dhaxeysa 10 ilaa maalmaha 20.
Qiyaasta-Tani waxay ka dhigan tahay inta daawo ee aad qaadaneyso, taasina waa 400 to600 mg mg of Epithalon maalintii.
DailyFrequency- Xilliga joogtada ah ee daawadani waa 200 mg kasta oo adeeg ah.
Qaadashada Epithalon Acetate (waxtarka dhexdhexaadka ah)
Daawadani sidoo kale waxay kuxiriirtaa iyada oo loo marayo buufinta sanka ama dhibcaha, markaa waxaan halkan ka ogaan doonaa qiyaasahan.
Duration-Muddada dawadan oo kale waxay la mid tahay kan kor ku xusan, kaas oo ku dhex jira 10 ilaa maalmaha 20.
Qiyaasta - Qiyaasta buufinada iyo dhibcaha waxay u dhexeysaa 15 ilaa 30 mg of Epithalon acetateper.
Maalin-maalmeedka - Xilliga maalin walba waxaa loo kala qaybin karaa saddex qaybood maalintii.
Qaadashada daawada Epithalon acetate (inta badanwaxtar leh)
Habka ugu dambeeya ee hoos ku xusan qiyaasta daawada waa habka la isku duro. Qaabkan, dawadu waxay bixisaa cirbad, habkana waxaa loo yaqaan habka ugu fiican uguna habboon. Qiyaasta habkan:
Duration-Muddada habkan ayaa la mid ah habka kale, taas oo ka kooban 10 ilaa maalmaha 20.
Qiyaasta - Qaddarka habkan waa 5 oo ah XMUMX mg maalintii.
Xaaladda - Inta jeer ee daawadani tahay mid halis ah maalin kasta qadar yar, halka midkiiba laba wakhti qaadan karo qiyaasta qiyaasta sare.
Koorsada hab kasta waxaa loogu talagalay 10 ilaa maalmaha 20, intaa ka dib markaan dhammeeyo koorsooyinka 10-20 mid waa inuu mar walba buuxiyaa farqiga buuxa ee 4to 6, ka dibna kadib, waxay ku celin karaan daawada. Ogaysiiskan wuxuu u yahay dhammaan saddexda koorsooyinka.
7. Epithalon Xaaladaha keydinta xayiraadda
Waa inaad ka fiirsatid sanduuqa daawada qaarkood oo ay ku qoranyihiin warqado cadaan ah DAKHLIGA, sanduuqaas oo ay ku siiyeen xaaladda xajinta ee daawadan. Daawooyinka qaarkood waxay ka kooban yihiin waxyaabo ay ka mid yihiin iyaga oo aan lagu hayn karin heerkulka qolka. Markaa daawooyinka noocan ah, waxaa jira shuruudo sax ah oo ay tahay in la dhigo oo la soo saaro oo kaliya marka loo baahan yahay in la isticmaalo. Tani waxay sidoo kale leedahay Kaydinta Epitoon Acetate xaaladaha, waxaan ka wada hadli doonnaa xaaladahaas halkaan.
Xaaladda kaliya ee la soo jeediyey halkan ayaa ah inay tahay in lagu hayo meel qabow sida qaboojiyaha. Waxaa la sheegay in haddii lagu sii hayo meel kulul, ka dibna tani waxay dhaawici kartaa daroogada. Dhammaan, waxaa ku jira 98% peptides pure, oo loo baahan yahay in la dhigo xaalad qabow kaliya oo aan lagu haynin kuleylka tooska ah. Tani waxay sidoo kale saameyn ku yeelan kartaa nadiifinta peptides.
Tani waxay ahayd xaaladda keliya ee kaydka ah ee lagusoo jeediyey in maskaxda lagu hayo.
8. Whalkan si aad u iibsato daawada epithalon acetate?
Waxaa jira qaar ka mid ah tafaariiqda internetka ah ee iibiya daroogada, maadaama daroogadani ay ka kooban tahay qaar ka mid ah asiidhyada amino. Sidaa darteed haddii aad rabto inaad iibsato daawada epithalon acetate, markaa waxaad si fudud u heli kartaa internetka oo awoodaan iibsadaan epithalon. Waxaa laguugu soo diri doonaa gurigaaga wakhti kooban.
Waxaa jira dad badan oo been abuur ah, kuwaas oo iibiya khalad ama daawooyinka been abuurka ah, waa inaad si habboon u baaraan shirkadda iyo dukaanka laga bilaabo halka aad ka iibsanayso daroogada. Sidoo kale waa inaadan helin wax daawo ah oo ka yimaada qaar ka mid ah ganacsadaha cusub, sababtoo ah daawadani waa mid muhiim ah oo kaalin mug leh ka qaadata nolosha bukaan socodka, sidaa daraadeed kiiskani waa inaad marwalba rumaysataa oo aad ka iibsataa daawo ka iibsanaya daawooyinka khibrad leh ee kaliya.
Tani waxay ahayd wax ku saabsan daawada Epithalon Acetate, ee maqaalkani waa inaan ka ogaanno waxyaabo kala duwan sida Faa'iidooyinka Epitalon acetate, Epithalon waxay cadeyneysaa qaabka lidka ku ah gabowga, codsiyada daawada Epithalon acetate iyo wax badan oo badan oo ku saabsan daroogadaas oo ah badbaadiye nololeed oo badan.
Waxaannu ogaannay in dawada Epithalon acetate ay ka caawiso kor u qaadista cabbirka telomere, oo ku jirta unugyada dhiigga, kaas oo qarsoodi ah laga soo saaro qanjidhada maskaxda ku jirta. Ma aha oo kaliya in daawadani ay sidoo kale ka caawiso aruurinta isha dhalashada indhaha. Waxay xitaa ka caawisaa in la dilo unugyada kansarka ee qof u gaar ah.
Ka dib markaa, waxaynu ka ogaannaa habka daroogadaas loo hormariyo qaybta aan ka sheegnay codsiyada dawada Epithalon acetate. Waxa kale oo aanu ogaanay faa'iidooyinka daroogada, halkaas oo aan u nimid inaan ka ogaano faa'iidooyinka daroogadaas.
Ka fogaanshahaas, waxaan ognahay qiyaasta daawadan Epithalon acetate. Qofka qaadanaya daawadan waa inuu had iyo jeer ka taxaddaraa qiyaasta dawadan, waana in uu qaataa daawada wakhtiga loogu talagalay. Barta xigta, waxaynu ka ogaannaa saameynaha daaweyntan, kadibna waxaan ka warqabnaa xaaladaha kaydinta daawadan. Waxaa jiray hal xaalad oo keliya oo lagu keydiyay, ugu dambeyntiina waxaan ognahay in laga yaabo in laga iibsado daroogadaas iyo wixii tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado marka la iibsanayo mid.